Nhau - Yechinomwe Taizhou International Electrothermal Technology
Yechinomwe Taizhou International Electrothermal Technology
Kubva November 1 kusvika 3, 2019, wechinomwe Taizhou International Electrothermal Technology uye Equipment Exhibition rakaitirwa Taizhou International Expo Center. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. yakakokwa kuti itore chikamu muchiratidziro uye yakaratidza zvigadzirwa zvazvino.Tiri kuratidza hunyanzvi, kutarisira-kumberi, uye kushanda kwesimba-kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza kwemagetsi emagetsi nemidziyo.
Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. yakashandisa zvakazara mukana uyu kutora chikamu mune zvakadzama kuchinjana, kutaurirana, kudzidza uye kunzwisisa kwevatengi zvakakwirira zvinodiwa uye zvinotarisirwa zvesilicon carbide kudziyisa zvinhu mune yazvino nharaunda, isu tine yakazadzisa chinangwa chekukwenenzvera zvigadzirwa zvedu, tichiita zvedu zvakanakira, nekuvandudza zvigadzirwa zvemberi. Chiratidziro ichi chakawedzera kuwedzera kwesimba kwekambani uye mukurumbira muindasitiri imwechete, uye ine yakadzika uye yakazara nzwisiso yemabhizimusi akajeka uye epamberi mune rimwe bhizimusi, saka iyi Taizhou International Electrothermal Technology uye Equipment Exhibition izere nekubudirira!
Muchiratidziro ichi, takasimbisa yedu yazvino yakakosha yesilicon carbide yekupisa zvinhu zvekuyangarara girazi tini mabhati uye Ultra-yakakwira tembiricha yesilicon kabhoni yekupisa zvinhu zveiyo 1625 ° C.
Mukugadzirwa kwegirazi rinoyangarara, sezvo iyo silicon kabhoni yekupisa chinhu iri mune yakaoma tini yekugezesa nharaunda kwenguva yakareba, pane zvakakosha zvakasarudzika zvinodiwa kune iyo silicon kabhoni yekupisa zvinhu zvekugezesa tini. Kazhinji, iyo silicon carbide yekudziya chinhu haigoni kumira nekuora kweye kwakanyanya tembiricha uye inoparadza gasi. Naizvozvo, iyo silicon kabhoni yekupisa chinhu chebhati rekugezesa rinofanira kuve neyakawedzera-density kudziyisa chinhu chine hupenyu hwakareba hwakareba.
Mune dzimwe nharaunda dzakakomba, vatengi vane zvakanyanyisa kuomeswa zvinodiwa uye zvinodiwa kune iyo yekupisa element yesilicon kabhoni yekupisa chinhu. Zvinoenderana neizvi, SICTECH yesilicon kabhoni yekupisa element yakagadzira yekupedzisira-yakanyanya tembiricha yesiloni kabhoni yekupisa element inodarika avhareji yesilicon kabhoni tsvimbo tembiricha ye1500 ° C, kuitira kuti kushanda kwayo tembiricha yasvika 1625 ° C! Uye kupa vatengi zvakasiyana siyana zvepamusoro-kuita kupisa muviri sarudzo, sarudzo MHD Ultra-yakakwira diki saroni kabhoni tsvimbo kudziyisa muviri, HD yakakwira-simbi yakasimba yekudziya muviri, HD yakakwira-density hollow kupisa muviri.
Mazuva matatu-Taizhou International Electric Heating Technology uye Equipment Exhibition yakakwezva mibvunzo yakawanda kubva kuvatori vechikamu. Vashandi veJiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co, Ltd yaive izere neshungu uye nehunhu hwakakomba, pamwe nehunyanzvi indasitiri mhinduro. Murairidzi akatsanangura musimboti wekushanda kwesilicon carbide kudziyisa chinhu, kushandiswa kwekuchengetedza matanho uye zvichingodaro. Kuburikidza neiyo yakazara yakazara mashandiro, vhidhiyo yekuratidzira, nezvimwe, mupi wezano ane nzwisiso yakazara uye kuziva kwezvigadzirwa zvedu.
Kubudikidza neTaizhou International Electrothermal Technology uye Equipment Exhibition, takasangana nevatengi, vagoveri uye shamwari kubva kumativi ese epasi. Isu takanzwisisa uye takadzidza ruzivo rwechizvino-zvino uye pfungwa mune yemagetsi kudziyisa indasitiri. Isu tinoziva kuti tinogona kupa mipiro mikuru kune yekudziya magetsi indasitiri uye kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Isu tine nzwisiso yakadzama yemabasa uye nemitoro yatinofanira kutakura. Ndinotenda isu tichafambira mberi takasimba, uye nekuva nani!